Skotlandia hanao referendum faharoa momba ny fahaleovan-tena avy any UK amin'ny 2023
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba an'i Scotland » Skotlandia hanao referendum faharoa momba ny fahaleovan-tena avy any UK amin'ny 2023
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao farany momba an'i Scotland • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny fihaonamben'ny antoko Nasionaly Scottish dia nanohana ny drafitry ny governemanta Scottish amin'ny fotoana hanaovana fitsapa-kevi-bahoaka iray hafa amin'ny fotoana fohy indrindra alohan'ny krizy COVID-19.
Ny praiminisitra voalohany any Ekosy dia mila fitsapan-kevi-bahoaka fahaleovantena faharoa.
Fitsapan-kevi-bahoaka fahaleovantena Scottish faharoa hatao amin'ny faran'ny 2023.
Ny referendum dia hatao amin'ny fotoana fohy indrindra aorian'ny krizy COVID-19.
Nandritra ny lahateny iray natao tamin'ny fihaonamben'ny antoko Scottish National Party (SNP) tamin'ny faramparany androany, dia nanambara ny minisitra voalohan'i Scotland Nicola Sturgeon fa mikasa ny hanao fitsapa-kevi-bahoaka iray hafa momba ny fahaleovan-tena avy amin'ny Fanjakana Mitambatra ny antokony.
Ny praiminisitra voalohany any Skotlandia, Nicola Sturgeon, dia nanambara fa mikasa ny hanao fitsapan-kevi-bahoaka iray hafa momba ny fahaleovan-tena avy amin'ny Fanjakana Mitambatra ny antoko misy azy.
Nilaza i Sturgeon fa ny faharoa Fitsapan-kevi-bahoaka momba ny fahaleovan-tena dia hotanana amin'ny faran'ny 2023 raha voafehy ny areti-mifindra COVID-19, ary nangataka tamin'ny governemanta britanika hanaiky izany "amin'ny fanahin'ny fiaraha-miasa".
Raha ny filazan'i Sturgeon dia nifidy parlemanta Scottish vaovao ny vahoaka tamin'ny volana Mey, izay manana “maro an'isa mazava sy betsaka manohana ny fitsapan-kevi-bahoaka”.
“Rehefa mivoaka amin'ny areti-mandringana isika, dia misy ny fanapahan-kevitra horaisina izay hamolavola an'i Ekosy mandritra ny am-polony taona ho avy. Ka tsy maintsy manapa-kevitra isika. Iza no tokony handray izany fanapahan-kevitra izany: olona eto Scotland na governemanta tsy ifidianantsika any Westminster. Izany no safidy kasainay atolotra ny vahoaka Scottish amin'ny fitsapan-kevi-bahoaka ao anatin'io fe-potoam-piasan'ny Parlemanta io - mamela ny COVID, amin'ny faran'ny 2023, ”hoy izy nandritra ny lahateny nataony.
Nanampy i Sturgeon fa "tsy anjaran'ny governemanta Westminster izay manana depiote enina monja ao Ekosy ny hanapa-kevitra ny hoavintsika raha tsy misy ny faneken'ny vahoaka monina eto."
Nilaza i Sturgeon fa tsy “hametraka ambaratonga marim-pototra ny aretina” raha toa ka mety hisy ny vato - “fa te hahita ny toe-draharaha COVID ianao”.
The Scottish National Party Ny fihaonambe dia nanohana ny drafitry ny governemanta Scottish momba ny fotoana hanaovana fitsapa-kevi-bahoaka iray hafa amin'ny fotoana mety indrindra “tranainy” taorian'ny krizy COVID-19.
Nilaza ny antoko fa ny daty dia tokony hofaritana amin'ny "masontsivana tarihan'ny angona" momba ny fotoana nahavitana ny krizy ara-pahasalamam-bahoaka.
Fitsapan-kevi-bahoaka momba ny fahaleovan-tena tany Skotika no natao tamin'ny 2014, raha 55 isan-jaton'ny mpifidy no nijanona nijanona tany Angletera. Fotoana fohy taorian'ny nahazoan'ny antoko Sturgeon ny fandresena fahefatra nisesy tamin'ny fifidianana parlemantera Scottish tamin'ny Mey, dia nivoady izy fa handrisika ny fitsapan-kevi-bahoaka fahaleovantena faharoa rehefa vita ny krizy pandemika.
Ny praiminisitra britanika Boris Johnson dia efa nilaza fa tsy hanaiky ny fitsapan-kevi-bahoaka fahaleovantena faharoa.
Miverina tsikelikely ny fiainana alina maneran-tany
Club Wyndham Flynns Beach Resort dia avo roa heny amin'ny habeny
Mpandeha amin'ny cruise Royal Caribbean vita vaksiny feno ...
Mitombo ny fahasosorana amin'ny fameperana ny dia
Edelweiss izao dia manolotra fifandraisana 2 isan-kerinandro avy any Zurich ...
Brinker International namoaka voafantina Q1 2022 ...
Amerika Latina Airbnb Vaovao Top 12 tianao indrindra